June 26, 2020 Waiyan Min Thant	Kalaw, Myanmar
တောင်ပေါ်မြို့လေး , တောင်စောင်းတလျှောက်ချစ်စရာခေါင်မိုးချွန်အိမ်လေးတွေနဲ့ အခုချိန်လောက်ဆို ခရီးသွားတွေကို စိန်ပန်းပြာတွေက ပင်လုံးကျွတ်တမြို့လုံးပွင့်ပြီး ကြိုဆိုနေလောက်ပါပြီ… ကလောရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး ကော်ဖီသောက်လို့ရမယ့် ကော်ဖီဆိုင် list လေး.. Hillock Villa /Cafe ကလောရဲ့ signature ခေါင်မိုးချွန် သစ်အိမ်လေးတွေနဲ့ ထင်းရှူးပင်လေးတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်/ ဟိုတယ်လေးပါ… ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းထဲ ခုံတန်းလးပေါ်မှာထိုင်ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ ကော်ဖီသောက်ရသလို ခံစားရမှာပါ. ရာသီပေါ်သီးနှံဖျော်ရည်စုံအပြင် ရှမ်းစာတွေလည်းရရှိပါတယ်။ Google MapsAddress: 10 Quarter, Damasatkyar Street, Kalaw 01000 Cafe Kalaw တောင်ကြားလမ်းဘေး မှာရှိပြီး နှစ်ထပ်သစ်သားအိမ်ပုံစံလေးနဲ့ ရှုခင်းကောင်းတဲ့ နေရာလေးပေါ့.ဒေသထွက် ကော်ဖီစေ့စစ်စစ်ကိုဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကျိတ်ပြီးဖျော်ပေးတဲ့Americano,cappuccino,latte တွေအပြင် wafer, toast တို့လည်း ရပါတယ်။ Google MapsAddress: Hnee …
Read the full post →“Kalaw‘s Dreamy Cafe”
LeaveaComment on Kalaw‘s Dreamy Cafe
April 13, 2019 cody kg	Gallery, Hotel Reviews, Myanmar, pool, Recommendation, Tips
အေးချမ်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ အပြည့်အဝရရှိစေမယ့် ပြင်ဦးလွင်မြို့က ဟိုတယ်ပြင်ဦးလွင်အကြောင်းလေး ဟိုတယ် Review အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တည်နေရာ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်နဲ့ အနီးဆုံးဟိုတယ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဟိုတယ်က ကန်တော်ကြီးသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိပြီး ကန်တော်ကြီးမရောက်ခင် အကွေ့လေးနားရောက်ရင် ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတာပါ။ ဟိုတယ်ကနေ ကန်တော်ကြီးအမျိုးသားရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်ကို ၅ မိနစ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ထဲကိုတော့ ကားနဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက်ပါပဲ။ ဟိုတယ်အနေအထား Reception အတွင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ပြင်ဦးလွင်က အိမ်အကြီးကြီးတစ်ခုထဲရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က အသုံးအဆောင်တစ်ချို့ရယ် ခေတ်မှီအပြင်အဆင်တွေနဲ့ ရောယှက်ပြီး ပြင်ဆင်ထားတာ လှပါတယ်။ ဟိုတယ်ခြံဝန်းထဲမှာတော့ ထင်းရှုးပင်၊ ပန်းပင်တွေ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့မို့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး လမ်းအနိမ့်အမြင့်တွေဘေးမှာ သစ်သားအိမ်ဘန်ဂလိုလေးတွေ အစီအရီနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ခြံဝန်းထဲမှာလည်း ပြင်ဦးလွင်နာရီစင်၊ ရေတံခွန်၊ ရေကန်ပေါ်မှာ သစ်သားတံတားလေးတွေနဲ့ …
Read the full post →“Hotel Pyin Oo Lwin ,Review”
hilly region, may myo, myanmar, pyin oo lwin, recommendation, resort, review, shan shate, swimming pool, vacationLeaveaComment on Hotel Pyin Oo Lwin ,Review
August 24, 2017 Aung Toe	English, Recommendation
You plan your whole trip right to the last details and you know that you have everything figured but you forgot to calculate in about how rainy it’s going to be. Don’t be dampen byalittle rain (oralot). Here are some activities you can do to save your day from that pesky …
Read the full post →“Rainy Day Travel Activities”
activities, bar, binge watch, monsoon, rain, rainy day, rainy season, spaLeaveaComment on Rainy Day Travel Activities
August 3, 2017 Aung Toe	English, Recommendation
National Museum of Yangon was first established since 1952 and moved to the current location in 1996. Visiting the the Museum in Yangon, will leave you mixed feelings. The National Museum of Yangon underwent tremendous renovation2years ago (2015), where all the artefacts were recategorised and now been displayed in somewhat “international standard.” However, the …
Read the full post →“National Museum Yangon”
burma, museum, myanmar, national museum yangon, yangonLeaveaComment on National Museum Yangon